Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa miseensota Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin mari’atan – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosHayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa miseensota Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin mari’atan
G/Q/W/A JIMMAA HORROO
QABAMANII DHIIFAMNI HINJIRU. NA BAASA JEDHEE KAN ITTI GALE SI’I.
Milishaa fi basaastuun kun RAASIMUU YOONAAS KABBADAA jedhamti. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti lubbuu ilma Oromoo hedduu waraana maafiyaa sirna nafxanyaa nyaachiste. Dhiyeenyuma kana Onkoloolessa 17/2020 aanaa Jimmaa Horroo ganda Gomboo bakka Hambashaa jedhamutti waraana geessuun qeerroo Muhaammad Yoonaas jedhamu ajjeesiste. Amma garuu milshaa shafoon kun osoo hin jaallatin harka WBO buute. Gatii ajjeesuu ajjeesuudha. Rasaasa ittiin ilma Oromoo ajjeesisaa ture dhadhamachuu oolaaree? Guyyaa har’aa humni addaa reeffasaa fudhattee galteetti. Yoo sammuun yaadu jiraate waayilootni isaa warri dhiiga namaan taphattan gatii argachuun oolmaa hin qabu. Du’a oolmaa hin qabneef du”a seenaa hin qabne du”uun du’a lama du”uudha.
QABAMANII DHIIFAMNI WBO BIRA HIN JIRU !!!
1991 Eeybisa waraana Adda bilisummaa Oromoo kan Marsaa Jalqabaa. Mooraa Qabsoo Dadaritti. Artist Jamaal Ali yeeroo Sirbu . Seenaa Rirmi hin nyaatu jae Hacaaluun.
#Kamal_galchu dhageeffadha mee
Bitama pp kansarii qabsoo oromoo!!
Jibinsi abiyyi ABO irra qabuu kessa bektoni bayyen nidubatu garuu kan rajii natti tahee hayyun oromo kolnolel gamachu ayyana